बुढाले आ’फ्नै छोरी लि’एर भा’गे पछि श्रीमतिको बे’जोक, गाउले ले ज’ङ्गलको झा’डिमा र’ङ्गेहा’त स’माते ! ( भिडियो सहित) – Jagaran Nepal
बुढाले आ’फ्नै छोरी लि’एर भा’गे पछि श्रीमतिको बे’जोक, गाउले ले ज’ङ्गलको झा’डिमा र’ङ्गेहा’त स’माते ! ( भिडियो सहित)
उनले आफ्नै छोरी सरह मानेर श्रीमानसंगै गोठाला पठाउने गर्थिन । उनीहरु गोठालोमा जाँदा काँस घारीमा उनीहरु जिस्किदै गरेको छिमेकीले देखेपछि आएर आफुलाई आएर कुरा लगाए । उनले भनिन्, अरुका कुरा सुनेर आफ्नै छोरीलाई नराम्रो सोच्नु पनि भएन । भिडियो हेर्नुहोस